Ukuhlinzekwa kwezidingongqangi okungenamfihlo manje - Amandla.mobi isiZulu
Qikelela ukuhlinzekwa kwezidingongqangi okungenamfihlo
Usuke wawabona ama-Service Delivery Agreement Kanye (SDA) nama-Municipal Services Partnership Agreements (MSPA) emahhovisini omasipala waseJoburg? Awazi ukuthi ziyini le zinto? Empeleni, kuvele kube ngathi iningi losopolitiki bafuna kube njalo. Phela iMunicipal Sysytems Act ithi ama-SDA Kanye nama MSPA kufanele kube izinto umphakathi okwazi ukufinyelela kozo , ukuze abantu abafana name nawe bakwazi ukwazi ukuthi yiziphi izinkampani, futhi zikhokhelwa kangakanani, eziqashwa umasipala ekuletheni izidingongqangi. Kodwa omasipala eMzansi wonkana aziwulandeli lo mthetho. Lokhu kwenza inkahlakalo yande.
Uma thina njengabantu baseJoburg sibambisana, sinamandla okwenza labo esibavotele baziphendulele.
Meya Herman Mashaba kanye neCity Manager Trevor Fowler,
Thina, izakhamuzi zaseJoburg, sifuna nizibophezele ukuthi komasipala enibamele nizoletha ukuhlinzeka ngezidingongqangi futhi nenze ukuthi umphakathi ukwazi ukufinyelela ezivumelwaneni omasipala abazenza nezinkampani abaziqashile, phecelezi ama-SDA kanye nama MSPA. Lokhu kuzosiza kakhulu ekuletheni ukuziphendulela kanye nokwenza kube sobala ukusebenza kwe-Joburg Metro. Uma kukhona ukungezwani phakathi koMasipala weJoburg Metro kanye nemiphakathi, kuba khona imibhikisho bese kuthi umsebenzi kaHulumeni ungabe usabonakala. Kubalulekile ukuthi nisebenzisane nemiphakathi futhi nenze ngenhloso ukuthi niyibandakanye ezinqunyweni ezithinta izimpilo zayo. Lokhu kuyindlela yokuvikela umsebenzi osuwenziwe kuze kube imanje.
Singakwazi ukuthuthukisa ukuhlinzekwa kwezidingongqangi siphinde silwe nokukhwabanisa uma umkhandlu waseJoburg uqikelela ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukufinyelela kumaService Delivery Agreements (SDAs). Abanye osopolitiki, izikhulu zomasipala kanye nosomabhizinisi bayasaba ukwenza lokhu. Uma bengenalutho abalufihlayo, basaba ini? Seka umkhankaso ofuna ukuthi uMeya Herman Mashaba kanye neCity Manager bafeze lokhu.